“YouTube” oo Muuqaallada Lagu Daawan Karo Internet La’aan 125 Dowladood.. Soomaaliya oo Kasoo Dhex Muuqatay – Goobjoog News
Barta caanka ah ee muuqaallada “YouTube” ayaa ku dhawaaqday iney soo kordhisay adeeg cusub oo la yiraahdo “YouTube Go” oo kuu suurtagelinaya inaad muuqaallada daawato iyadoo aan Internet kuu xiriirsaneyn, waxaana hadda adeeggan laga hirgeliyay 125 dowladood oo daafaha kala duwan ee dunida ka kala tirsan.
Shirkadda Google ee leh milkiyadda “YouTube” ayaa danta ay adeeggan cusub ka leedahay uu yahay in loogu adeego suuqyada soo koraya ee xawaaraha Intenet-koodu uu hooseeyo, si ay dadbadani u adeegsadaan shabakadeedda.
Shuruudo qaar ayaase ku xiran adeeggan muuqaal kalama soo degi kartir illaa inaad isticmaasho App mobile Smartphone ah mooyaane, meelkalana muuqaaladaa lagalama soo degi karo.
Muuqaalada offline-ka lagu daawanayo mudadoodu kama badan karto 48 saacadood waa marka aad ku darsato liiska aad offline-ka ku daawanayso ee internet la’aaanta ah.
Adeeggan markii dowladda aad joogto uu u furan yahay badhanka “Like” agtiisa ayaad ku arki doontaa calaamad download, taas oo kuu ogolaanaysa inaad muuqaalka daawato xilli kale oo markii uu internet-ku hawada ka maqan yahay ay kuu suurtogaleyso inaad daawato.
Si kastaba, waxaa nasiib wanaag ah in dalkeennu ku jiro dalalka 125 dal ee loo ogolaaday iney internet la’aan daawan karaan muuqaallada YouTube.
Dowladaha loo ogolyahay adeeggan YouTube Go